iPhone 6s Plus - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPhone 6s Plus tonga ho lasa taranaka faharoa amin'ny Apple phablet. Miaraka amin'ny iOS 9, Apple manamafy ny iPhone 6s Plus ho safidy mety indrindra ho an'ireo izay maniry hankafy ny iOS 9 ao anaty iray Efijery 5,5 inch ary ny vahaolana Full HD, ireo fiasa izay mijanona tsy mitombina raha oharina amin'ny teo alohany. Tsy afaka manadino koa isika 3D Touch, ny teknolojia ahafahana mamantatra ambaratonga tsindry isan-karazany eo ambonin'ny efijery, zavatra izay hampiasain'ny iOS 9 amin'ny iPhone 6s Plus.
Na dia tsy niova aza ny endriny, ny iPhone 6s Plus dia miaraka amin'ny fanatsarana ny fitaovany. Hanombohana, ny vaovao Processeur Apple A9 mampanantena hery bebe kokoa sy fahombiazan'ny angovo lehibe kokoa hahatonga ny bateria iPhone 6s Plus haharitra kokoa. Ny firesahana ny Fahatsiarovana RAM 2 GB hahafahanao manana rindranasa misimisy kokoa ao aoriana.
La Fakan-tsary iPhone 6s aoriana Plus mahazo fahazavana mazava tsara noho ny sensor 12 megapixel azy ary manatsara ny antsipirihany amin'ny toe-jiro, hahatonga ny sarinao ho tsara kokoa noho ny hatramin'izay.
Vidin'ny IPhone 6s Plus
Ny iPhone 6s Plus dia ho hita manomboka amin'ny volana septambra amin'ny volamena, volondavenona, volafotsy na mavokely mitambatra amin'ny fotsy eo aloha. Ny terminal dia ho hita amin'ny capacities 16 GB, 64 GB ary 128 GB amin'ny vidiny 849 euro, 959 euro ary 1.069 euro.
Ny vaovao rehetra momba ny iPhone 6s Plus
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny iPhone 6s sy iPhone 7
Efa ho 24 ora no lasa hatramin'ny nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny iPhone 7 vaovao ary mbola tsy maro ny mpampiasa ...
Ny iPhone 6s no finday avo lenta indrindra tamin'ny telovolana faharoa 2016
ny Karim Hmeidan hace 5 taona .
Eny, mbola lavitra ny fiandohan'ny fampisehoana Keynote an'ny iPhone 7 isika, fampisehoana iray izay ...
Hevitra Black iPhone 7, nataon'i Martin Hajek
Na dia tsy nanaiky an-karihary azy aza i Apple, dia nitsahatra nanolotra iPhone mainty tanteraka ny vahoaka Cupertino taorian'ny ...
Reny iray no mamonjy ny ain-janany vavy amin'ny alàlan'ny fampiasana an'i Siri hiantsoana ER rehefa manao CPR
Hatramin'ny nanombohan'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao, nifantoka tamin'ny fampiroboroboana ireo toetra tsara sy ...
Apple dia namoaka horonan-tsary 8 vaovao tamin'ny fampielezan-kevitra "Shot on iPhone"
Apple dia nanolotra ny findainy roa farany, ny iPhone 6s ary ny iPhone 6s Plus, tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa. Efa…
Ireo, ho ahy, ny fihetsika 10 Touch 3D tsara indrindra
Tamin'ny volana septambra 2014, nanolotra ny Force Touch i Apple, karazana efijery vaovao izay manavaka ny fanerena samihafa, mba ...
Galaxy S7 dia mahavita mihoatra ny iPhone 6s amin'ny refy
Lojika izany, na dia tsy mahita izany aza ny mpamaky sasany, fa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia niresaka bebe kokoa momba ...